Wararka - Sanadka cusub ee Shiinaha ayaa imanaya
Sannadka Cusub ee Lunar ee 2021 waa 12-ka Febraayo.
Inta lagu jiro Bandhigga Gu'ga, Shiinaha Han iyo qaar ka mid ah qowmiyadaha laga tirada badan yahay waxay qabtaan dabaaldegyo kala duwan. Hawlahani waxay inta badan caabudaan awoowayaasha, oo leh qaabab hodan ah iyo midabbo leh iyo sifooyin qowmiyadeed hodan ah.
Saamaynta dhaqanka Shiinaha, waddamada qaar iyo quruumaha ka tirsan goobaha dhaqanka dabeecadda Shiinaha ayaa sidoo kale leh caado ah inay u dabaal dagaan Damaashaadka Guga. Maalinta Ciidda Guga, dadku waxay ku laabtaan guryahooda intii suurtagal ah si ay ula midoobaan eheladooda, iyagoo muujiya rajada ay ka qabaan sanadka soo socda iyo rajadooda ugu wanaagsan sanadka cusub.
Bandhigga Guga ma ahan oo keliya xaflad laakiin sidoo kale waa shirkad muhiim u ah dadka Shiinaha inay sii daayaan shucuurtooda ayna ku qancaan dalabaadka nafsiyan ah. Waa carnival sanadle ah oo qaranka Shiinaha.
Waqtiga dhejinta: Feb-08-2021